Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမြို့တွင် တင်သွင်းအေးခဲအစားအစာများမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး တွေ့ရှိ
တရုတ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တင်သွင်း
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လျောင်နင်ပြည်နယ် တာ့လျန်မြို့၊ တာ့လျန်ဆိပ်ကမ်းရှိ အအေးခန်းသို့လှောင်ရုံတစ်ခုတွင် တင်သွင်းလာသော အေးခဲစားသောက်ကုန်သေတ္တာများကို အလုပ်သမားတစ်ဦးက နေရာချနေစဉ် (ဆင်ဟွာ) Economy
မြို့အတွင်းသို့ တင်သွင်းသည့် မည်သည့်အေးခဲအစားအစာကိုမဆို အအေးခန်းသို့လှောင်အတွင်းသို့ မထားသိုမီ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှတင်သွင်းသည့် အေးခဲ ဝက်နားရွက်အလွှာတစ်တွဲမှ အဆိုပါ နမူနာကို ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းမြို့၏ ကပ်ရောဂါတားဆီးထိန်းချုပ်ရေးရုံး၏ အဆိုအရ သိရသည်။
၎င်းကုန်စည်များ၏ မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမှ ဒေသတွင်းဈေးကွက်သို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ရသေးကြောင်း၊ ဒေသတာဝန်ရှိသူများက အစားအစာများကို ချိပ်ပိတ်ခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သူများအား အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုန်းလမ်းနှင့် ရေလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုများမှ တင်သွင်းလာသည့် အေးခဲအစား အသောက်များမှ ကူးစက်မှုကို တားဆီးနိုင်ရန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက နိုဝင်ဘာလတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ တင်သွင်းအစားအသောက်များမှတစ်ဆင့် COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးပိတ်ဆို့ရန် အရှိန်အဟုန်မြှင့်အားထုတ်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရန် တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီသည် တင်သွင်း အေးခဲအစားအသောက်များ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်လုံး၊ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြေရာခံနိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သော စီမံကိန်းတစ်ရပ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
NANJING, Dec. 16 (Xinhua) -- An imported frozen food sample in the city of Wuxi, east China's Jiangsu Province, tested positive for the novel coronavirus, local authorities said Tuesday.
The sample was taken fromabatch of frozen sliced pig ears imported from the United States as part ofaregular screening before the entry of any imported frozen food into the city's cold storage warehouse, according to the city's epidemic prevention and control office.
None of the goods have been distributed into the local market. Local authorities have sealed and disinfected the food and quarantined those who had contact with the tainted items.
China has stepped up efforts to block COVID-19 spread through imported foods, with the Ministry of Transport releasingaguideline in November to prevent the transmission of the virus through imported cold-chain foods in road and water transportation.
The State Council joint prevention and control mechanism against COVID-19 has also unveiledaplan to realize full-chain, closed-loop, traceable management of imported cold-chain foods. Enditem